Faah faahin:- Dagaal beeleed xalay ka dhacay deegaanka Baanyaale ee degmada Maxaas – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal beeleed xalay ka dhacay deegaanka Baanyaale ee degmada Maxaas
Wararka naga soo gaaraya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeyay labo maleeyshiyo beeleed uu habeenkii xalay ka dhacay deegaanka Baanyaale, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Labada dhinac ayaa la sheegayaa inay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi uu salka ku haayo lahaanshiyaha dhul ku yaalla deegaanka Baanyaale iyo sidoo kale aano hore oo ay labada dhinac uga dhaxeeysay, taasoo aan weli xal laga gaarin.
Inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku geeriyootay, halka 20 kalena ay ku dhaawacantay, kuwaas oo dhaawacyadooda lakala geeyay isbitaalada ku kala yaalla magaalooyinka gobalada Hiiraan iyo Galgaduud.
Dagaalkaasi ayaa ka dhacay deegaanka Baanyaale oo ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Xiisad colaadeed ayaa la sheegayaa inay weli ka taagan tahay deegaanka Baanyaale ee degmada Maxaas, iyadoona labada beelood ee ku nool deegaankaas, aanay jirin cid kala dhex gashay oo heshiis nabadeed kala dhex dhigtay.